Mid kamid ah qoyska Boqortoyada Sacudi Carabiya oo xukun karbaash ah lagu fuliyay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Mid kamid ah qoyska Boqortoyada Sacudi Carabiya oo xukun karbaash ah lagu fuliyay!!
Mid kamid ah qoyska Boqortoyada Sacudi Carabiya oo xukun karbaash ah lagu fuliyay!!
Nov 03, 2016WARAR
Sida lagu daabacay wargeyska Okaz ee ka soo baxa Boqortoyada Sacudi Carabiya amiirkan la karbaashay oo aan la magacaabin ayaa weli xabsi ku sii jira.Hase yeeshee lama sheegin dambiga uu galay amiirkan kaasoo sababay in la karbaasho.
Xukunka karbaashka ah ayaa fuliyay askari ka tirsan ciidamada Booliska Isniintii lasoo dhaafay kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyay Amiirka la karbaashay.
Bishii laga soo gudubay ayaa xukun dil ah lagu fuliyay Amir Turki bin Saud al-Kabir kadib markii uu qirtey inuu diley Adel al-Mohaimed.
Bogga arrimaha bulshada dadka isticmaala ayaa u tarjumay xukunadan ku dhacay Amiirada mid calaamad u ah sinaan dhinaca sharciga.
Boqor Salman oo 80-sano jir ah ayaa loo malaynayaa inuu doonayo in uu wax ka qabto boqolaal dhalinyaro qoyska reer Boqor ah kuwaas oo sidey doonaan u dhaqma Iyaga oo qaar kamid ah tumasho u aado Marekanka iyo Dalaka Yurub.
Previous PostDaawo Sawiro Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda !! Next PostDaawo Muuqaal: Shacabka Gaalkacyo ee Dagaaladu Curyaamiyeen oo ka hadlay Heshiiska Cabdiwali Gaas iyo Guuleed!!